निजी प्रयोजनका गाडीलाई पनि हायर पर्चेज कर्जा पाइने भयो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर निजी प्रयोजनका गाडीलाई पनि हायर पर्चेज कर्जा पाइने भयो
on: ८ माघ २०७५, मंगलवार ०७:३३ मुख्य खबर, समाचार
काठमाडौं । अबदेखि हायर पर्चेज कर्जा दिने उद्देश्यले स्थापित कम्पनीले निजी प्रयोजनका लागि पनि त्यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म त्यस्ता कम्पनीले कृषि, औद्योगिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मात्र सवारी साधन, मेशिनरी औजार लगायत खरीद गर्न हायर पर्चेज कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’मा दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थपेको हो । यसअघि ठूला कम्पनीलाई मात्र यस्तो प्रकृतिको कर्जा दिइन्थ्यो । खुलाबजार अर्थतन्त्र भएकाले सबैलाई हुने गरी अहिले हायर पर्चेजको परिभाषामा नै ‘निजी प्रयोजन’का लागि समेत सुविधा पाउने थप व्यवस्था गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका निर्देशक वीरेन्द्रदत्त अवस्थीको भनाइ छ । सो व्यवस्थाअनुसार सोही शीर्षकमा व्यक्तिगत सवारीसाधन किनेर उपभोग गर्न पाइने छ ।
संशोधित व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीसँग हुनुपर्ने चुक्तापूँजीको रकमसमेत बढाइदिएको छ ।
हाल न्यूनतम रू. १० करोड चुक्तापूँजी भए पुग्नेमा अब खुल्ने कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार हाल सञ्चालन भएका हायर पर्चेज कम्पनीहरूले २०७७ असार मसान्तसम्ममा रू. २० करोड र २०७८ असार मसान्तसम्ममा रू. ३० करोड चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने छ । निर्देशक अवस्थीका अनुसार यस्ता कम्पनीको उपस्थिति बढी भएको क्षेत्रमा थप नयाँ कम्पनीको निवेदन आएमा अस्वीकार गर्न सकिनेछ ।
यस्ता कम्पनीले हरेक २ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले कम्पनीको नवीकरण शुल्क बढाएर रू. २ लाख पुर्‍याएको उनले बताए ।
यसअघि यस्तो शुल्क रू. १ लाख थियो । कम्पनीले नवीकरण २ वर्ष सकिएको साउन मसान्तसम्म नगरेमा भदौ मसान्तमा थप १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म थप २० प्रतिशत दस्तुर बुझाउनु पर्ने उनले जानकारी दिए ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका लागि थप व्यवस्था
सापटी लिई कर्जा दिँदा ब्याजदर अन्तर ३ प्रतिशतसम्म मात्र
आव सकिएको ६ महीनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने
रू. १० लाखभन्दा बढीको कर्जा दिँदा अनिवार्य कर्जा सूचना लिनुपर्ने
एकै कम्पनी ब्रान्डका सवारी साधन तथा मेशिनरीमा लगानी गर्न नपाइने
चुक्तापूँजी दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आवको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ।
कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सवारीसाधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरीद गर्न यस्तो कर्जा पाउ“छन् । यसरी किनिएको वस्तु कर्जादाताको नाममा हुन्छ र ऋणीले त्यो भाडामा प्रयोग गर्न पाउँछ । त्यसको भाडा किस्ताबन्दीमा तिर्दै गएर तोकिएको अवधि पूरा भएपछि त्यो वस्तु ऋणीकै नाममा नामसारी हुन्छ ।
२२ माघ २०७५, मंगलवार ०७:४९